ktmkhabar.com - अब्बल शिक्षक, प्र.अ. हुँदै अब विज्ञ डोर सर !
किशोर अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा होमिएर तीन दशक लामो शिक्षा सेवालाई विराम दिएर विद्यालयबाट बाहिरिएको केही समय पश्चात उहाँलाई एक दलले देशकै शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गर्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दियो । शिक्षक, प्रधानाध्यापक हुँदै विज्ञसम्मको दुर्लभ यात्रा तय गर्ने उहाँ अर्थात डोरप्रसाद आचार्यले आज आफ्ना समकक्षी माझ शिक्षा क्षेत्रमा गर्विलो इतिहास निर्माण गर्न सफल हुनुभयो ।
यही सन्दर्भमा केही शब्दहरु लेखौँ कि भनेर कलम समातेको छु । यसको पछाडि दुई प्रमुख कारण छन् । पहिलो आफ्नै अनन्य मित्र, सहकर्मीले लोभलाग्दो उपलब्धि हासिल गरेकोमा मन पुलकित भएको छ र उहाँलाई शब्दहरु मार्फत बधाई र शुभकामना पनि दिन चाहान्छु । दोश्रो, उहाँलाई किन उक्त दलले विज्ञको रुपमा शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय योगदान दिन काबिल ठान्यो ? यही सन्दर्भ र केही समसामयिक विषयमा माथापच्चीसी गरौँ । हामी सबैलाई उत्प्रेरण दिनसक्ने केही खुराकहरु अवश्य प्रष्फुटन हुनेछ ।
देशको राजधानी काठमाडौँमा औँलाको गन्तीमा गनिने महत्वपूर्ण शिक्षकहरु मध्ये एक डोरप्रसाद आचार्यलाई कपन स्थित अहिलेको सुविधा सम्पन्न बालउद्धार माध्यमिक विद्यालयको बलियो जग हाल्ने मुख्य श्रेय जान्छ । प्रा.वि.,नि.मा हुँदै मा.वि. सम्मको यात्रामा उहाँले प्रधानाध्यपक भएर बालउद्धारलाई एउटा अब्बल विद्यालयको यात्रामा अघि बढाउनुभयो । विद्यालयको भौतिक तथा गुणस्तीय विकासमा उहाँको योगदान उल्लेख्य छ ।
शिक्षा राष्ट्रिय पुरस्कारबाट दुई पटक (२०६६ र २०६९) सम्मानित हुनुभएका डोर सर क्षेत्रिय विद्यालय समन्वय समितिको कोषाध्यक्ष हुँदै पूर्व क्षेत्रिय विद्यालय समितिको अध्यक्ष समेत हुनुभयो । अर्काे तर्फ नेपाल शिक्षक संघ काठमाडौँ जिल्ला कार्यसमितिको पनि उहाँ सदस्य भई योगदान दिनुभयो । यसरी खोताल्ने हो भने डोरसरको वायोडाटाले निक्कै पेजहरु भर्न सक्छ । यसबाट हामीले उहाँको उल्लेख्य शैक्षिक क्रियाशिलतालाई उजागर गर्छ ।
हाल एक विद्यालयबाट विदा भए पनि डोर सर कपन वहुमुखी क्याम्पसमा २०६९ सालदेखि निरन्तर सहायक क्याम्पस प्रमुखको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । त्यस वाहेक कपन स्थित जुगल नवगुरुकुल भनेर नयाँ थिममा सहित संचालन भइरहेको संस्थागत विद्यालयको पनि उहाँ संस्थापक अध्यक्षको रुपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ । गुरुकुल पद्दतीमा सिप,संस्कार र प्रिविधिलाई जोडेर नयाँ शिक्षा प्रणाली प्रार्दुभाव गर्दै गरेको जुगल पनि यस क्षेत्रमा चर्चा कमाइरहेको छ ।
सेवानिवृत्त हुन १२ वर्ष बाँकी रहदै विदा भएर जाँदै गर्दा उहाँले गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको लागि छात्रावृत्ति प्रदान गर्न नगद रु एकलाख विद्यालयलाई प्रदान गरेर उहाँले सम्झनालायक विदावारी लिनुभयो । भव्य कार्यक्रम विच आफ्नो प्रत्यक्ष सेवालाई विराम दिएको घोषणा गर्दै गर्दा डोर सरको मुहारमा एक पृथक कान्ति देखिन्थ्यो । त्यो कान्तिले उहाँको आफ्नो उपलब्धिहरुको झण्डा फरफराइरहेको आभाष हुन्थ्यो ।
तर, लामो समयदेखि सँगै कार्यरत म लगायत धेरै साथीहरु, विद्यार्थीहरु, अभिभावकहरुको आँखा भने रसिलो बन्यो । कता कता उहाँको विदाईले खल्लो महसुस गरायो । तर, जीवन यात्रा यस्तै हो । आउने जाने भइ नै रहन्छ । मन त बुझाउनै प¥यो ।
बालउद्धार मा.वि.लाई उहाँले दिनुभएको योगदान जगजाहेरै छ । त्यसबारे धेरै बोल्नु परेन । तर, उहाँको वहुआयिमक व्यक्तित्वबारे केही घोत्लिन मन लाग्यो ताकी हामी सबैलाई प्रेरणा दिन सकोस् ।
काम गर्ने क्रममा सबैका राम्रा–नराम्रा पक्षहरु होलान् तर डोर सरले सधैँ भरि विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकसँग आशा र भरोषाको केन्द्रविन्दुमा रहेर बाल उद्धारलाई मात्र नभई समग्र काठमाडौँ जिल्लामा अब्बल, सक्षम, कुशल व्यवस्थापकको पहिचान बनाउन सफल हुनुभयो । वास्तवमा फर्केर हेर्ने हो भने डोर सरले यस क्षेत्रको शिक्षामा एउटा ‘नुतन घाट’ निर्माण गर्नुभयो । जति खेर उहाँले बालउद्धारलाई हाँक्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको देशको समग्र शिक्षा र यहाँको समाज दुबै निक्कै पछाडि थियो । त्यस्तो अवस्था पनि उहाँले विद्यालयलाई सहीरुपमा अगाडि बढाउनु भयो । शिक्षाको सन्दर्भमा उहाँको एउटा चट्टानी विश्वास र दर्शन थियो र छ । “कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकहरुको शैक्षिक रेखदेखमा विद्यार्थी, अभिभावक हुँदै सिङ्गो समाज रुपान्तरण गर्नुपर्छ । त्यो समाजले क्रमिकरुपमा, क्षेत्र हुँदै देशलाई नै परिवर्तन गर्नसक्छ । अनि मात्र हामीले गरेको शैक्षिक सेवाको अर्थ रहन्छ । तर, रुपान्तरण आफैँबाट हुनुपर्छ ।”
उहाँले देश परिवर्तनको मुख्य अस्त्र शिक्षालाई मान्नु भएको छ । र, त्यसको लागि हरेक शिक्षकले पहिले आफुलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको मत छ । निश्चित रुपमा शिक्षाले मात्र देश परिवर्तन हुनसक्छ । आज हामीले विकसित देशहरुलाई हे¥यौँ भने त्यहाँको अब्बल शिक्षा प्रणाली उजागर भएर आउँछ । तर, हामीले नेपालमा शिक्षालाई मामुली ठान्यौँ । शिक्षकहरुलाई मामुली ठान्यौँ । परिणाम स्वरुप देशले उल्लेख्य रुपमा फड्को मार्न सकिरहेको छैन ।
डोर सरले एउटा विद्यालय मार्फत विद्यार्थीलाई मात्र होइन सिंगो समाजलाई सिक्ने र सिकाउने विधि दिँदै समाजलाई सकारात्मक रुपान्तरणको दिशा देखाउनु भयो । उहाँले अभिभावक शिक्षालाई सधैँ महत्व दिनुभयो । बालउद्धारमा डोरलाई नचिन्ने अभिभावक साहेदै होला । प्रत्येक अभिभावकलाई उहाँले नाम थर र ठेगाना सहित चिन्नुहुन्थ्यो । यसो हेर्दा यो चिनजान भन्ने कुरा ठूलो होइन कि जस्तो देखिन्छ तर त्यस मार्फत उहाँले समाजको रुपान्तरणमा खेलिरहनु भएको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । वास्तवमा परिवार र समाज संस्कारयुक्त भयो भने मात्र संस्कारी विद्यार्थी निर्माण संभव छ । र संस्कारयुक्त विद्यार्थी दक्ष हुँदै देश विकासमा लाग्न सक्छन् ।
अर्काे तर्फ आफुलाई परिवर्तन गरेर मात्र अरुलाई परिवर्तनको लागि निम्तो गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको विश्वास र प्रयास पनि महत्वपूर्ण छ । अहिले हरेक क्षेत्रमा मानिसहरुले समस्या अरुमा मात्र बढी देखिरहेका छन् । म त ठिक छु । अरु परिवर्तन होस भन्ने मनोकामना छ । तर, जुन दिन हामीले आफुलाई परिवर्तन गर्छाैँ त्यही दिनबाट दुनियाँ आफैँ परिवर्तन हुन्छ ।
एक सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध बने । दरबारबाट सिद्धार्थका दुई पाइला निस्केको थियो तर आज उनको दुई पाइलालाई करोडौँ पाइलहरुले पछ्याई रहेका छन् । यो अदुभूत तथ्य छ । डोर सरले सदैव हर क्षेत्रमा आफुलाई परिर्वतन गर्नुभयो । एक कुशल शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण कौशालता उहाँले पहिला आफुमा उर्तानु भयो । त्यही परिवर्तनको धारमा उहाँसगै अरु पनि बगे र उहाँले आज यो उचाई बनाउनु भयो ।
शिक्षाप्रति उहाँको लगाव, प्रयास र सोच अनुकरणीय छ । आज काठमाडौँ जिल्ला भरी नै डोर सरलाई श्रद्धापूर्वक नियाल्ने मानिसहरुको ठूलो संख्या छ । एउटा शिक्षकले पाउने यो भन्दा ठूलो उपहार अरु के होला र ?
शिक्षासँगै उहाँलाई समाज सेवामा पनि उत्तिकै लगाव छ । यहाँका अधिकांश मठमन्दिर, क्लवहरु, महिला समूहरु, विकास निर्माणका कार्य आदि विभिन्न क्षेत्रमा उहाँले तन, मन र धन दिएर सहयोग गर्नुभएको छ । आफ्नो व्यक्तित्वलाई सकेसम्म उहाँले फैल्याउनुभएको छ । जसको यो समाजले त कदर गरेकै छ त्यो भन्दा नि देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसले पनि यसको उच्च मुल्याङ्कन गरेको छ । यसले प्रतिभाशाली व्यक्तिहरुलाई उत्साह जगाएको छ ।
भर्खरै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय नीति,अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले उहाँलाई प्राथमिक शिक्षा तथा बालबालीका विषयगत समितिको विज्ञको रुपमा नियुक्त गरेको छ । एउटा निवृत्त शिक्षकलाई फेरि राष्ट्रिय रुपमा शिक्षा क्षेत्रमै काम गर्न प्रेरित गर्नु प्रशंसयोग्य छ । यस्तो कदमको लागि पार्टी पनि धन्यवादको पात्र बनेको छ ।
यती उल्लेख गर्दै गर्दा यही पृष्ठभूमिमा एउटा महत्वपूर्ण विषय उजागर भएर आउँछ । त्यसलाई पनि छुन मन लाग्यो । त्यो विषय छः शिक्षक र राजनीति । डोर सर त निवृत्त भएर गइसक्नु भयो । तर, कार्यरत धेरै शिक्षकहरुलाई एउटा प्रश्नको झटारो सधैँ आइरहन्छ ।
शिक्षक भएर राजनीति गर्नुहुन्छ ?
शिक्षकको काम पढाउने हो कि राजनीति गर्ने ?
यो विषयमा डोर सर सित पनि मेरो लामै विचारविमर्ष भयो । हामी दुवैको कुराहरु लगभग उस्तै छ । शिक्षकलाई राजनीतिसँग जोड्दै गर्दा राजनीति के भन्ने सन्दर्भमा मेरो केही समझ राख्न चाहान्छु ।
राज्यलाई विकास गर्ने नीति नै राजनीति हो । यदि कसैले राज्यलाई विकास गर्ने नीतिसँग जोडिर धेरथोर भए पनि योगदान गर्न मन छ भन्यो भने उसले पाउने कि नपाउने ? निश्चित रुपमा पाउँनुपर्छ । यस्तो देश विकासको नीति जोसुकैले गरे हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
अलि गहिरिएर हे¥र्याे भने राजनीति भन्ने कुरा “गर्ने” भन्दा पनि “हुने” रहेछ । पिरती आफैँ हुँदै रहेछ भने जस्तो राजनीति थाहै नपाई हुने रहेछ । मेरो ख्यालमा समाजमा हरेक मानिसहरु थाहा नपाइ राजनीतिको मैदानमा प्रवेश गर्दा रहेछन् । माछाको लागि पानी र मानिसको लागि राजनीति उस्तै हो । हरेक मानिस राजनीतिले घेरिएर रहेको हुन्छ । एउटा नागरीक राजनीतिलाई नछोइकन बाँच्न सक्दैन । कसरी ?
देशको नागरीक भएपछि भोट हाल्नुपर्छ । भोट हाल्नु नागरीकको कर्तव्य हो भनेको सबैले सुनेकै छ । भोट हाल्नुलाई पार्टी चिन्नु प¥र्याे । नेता चिन्नु प¥र्याे । पार्टी र नेता चिन्ने क्रममा मानिस राजनीतिक मैदानमा प्रवेश गरिहाल्छ । भोट हाल्ने कार्य आँखामा पट्टी बाँधेर घैँटो फुटाको जस्तो होइन ।
यसो विचार गरौँ त । पार्टीसँग सम्बन्ध नभइकन (मन नपराइकन) भोट हाल्ने मानिसहरु कति होलान ? जस्तो सुकै तर्क गरेपनि नागरीकता लिएका सबैले कुनै न कुनै रुपमा कुनै एक पार्टीलाई समर्थन गरेकै हुन्छ । समर्थन गर्नु नै भित्र भित्रै कार्यकर्ता हुनु हो । अनि शिक्षक, डाक्टर, खेलाडी, कलाकार जो सुकै भए पनि राजनीतिक रंग त जबरजस्त लागि हाल्छ । शिक्षण पेशा नै बौद्धिक क्षेत्रमा पर्छ । तसर्थ शिक्षकले आफ्नो बौद्धिकता प्रस्तुत गर्न चाहान्छ । अतः कुनै पेशाकर्मीले राजनीति गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा तर्क संगत छैन ।
अर्काे तर्फ शिक्षकले राजनीति गर्नुहुँदैन भनेर बहस गर्नेहरु राजनीतिक नेताहरु नै आफ्नो पार्टीसँग जोडिएको शिक्षक संगठन खोल्न लगाउँछन् । यस्तो संगठनहरु शिक्षा, स्वस्थ्य, कानुन, निजामति कर्मचारी, इन्जिनियर, पत्रकार सबै तिर छन् । धेरै जसो ति संगठनहरु कानुन सम्वत नै छन् । शिक्षाविद्हरु पनि शिक्षकलाई राजनीति भूमिमा पाइला टेक्न निषेध गर्छन । तर, फेरि उहाँहरु नै राजनीतिक नियुक्ति कुरेर बसेको देखिन्छ । शिक्षकले राजनीति ग¥र्याे भनेर औँला उठाउने एकजना गैर राजनीतिक मानिस म देख्दिन ।
अब विद्यालय भित्र प्रवेश गरौँ । पाठ्यपुस्तक हेरौँ । राजनीति महत्वपूर्ण विषय भएकोले माध्यमिक तहमा राजनीतिबारे महत्वपूर्ण अध्ययन सामाग्रीहरु राखिएको छ । विद्यार्थीहरुले पार्टीको घोषणा पत्रदेखि दलका नेताहरुको समेत जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । राम्रो राजनीतिक समझ भएको शिक्षकले मात्र राजनीति राम्ररी पढाउन सक्छ । यो विषय विद्यालयमा केवल परीक्षाको लागि मात्र राखेको होइन । विद्यार्थीहरुलाई राजनीति सिकाउन पनि राखिएको हो । भोलि एउटा अब्बल विद्यार्थीले राजनीतिमा प्रवेश ग¥यो भने देश परिवर्तन हुन सक्छ । शिक्षकले राजनीति पढाउन हुने तर गर्न नहुने ?
डोर सरले शिक्षकहरु कसरी राजनीतिमा जोडिदा रहेछन् भनेर एउटा रोचक प्रसंग सुनाउनु भयो । सबैले असल शिक्षकको रुपमा चिन्न थाले पछि सबै पार्टीका स्थानीय, क्षेत्रिय र केन्द्रिय नेताहरुले म सित भेटघाट गर्न थाले । विभिन्न कार्यक्रमहरु बोलाउन थाले । सबै पार्टीहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा निरन्तर पछि लागिरहे । हरेक पार्टीको नीति नै सबै शिक्षकहरुलाई आफ्नो समर्थक बनाउने ताकि समाजमा राम्रो प्रभाव छाड्न सकियोस् भन्ने हुन्छ । तर म श्रद्धेय नेता वि.पि.कोइरालको विरासत बोकेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको विचार सित यस अघि नै जोडिसकेकोले अन्य पार्टीहरुको कुराले छोएन ।
डोर सरले भने झैँ धेरै शिक्षकहरुलाई यसरी नै विभिन्न पार्टीहरुले पछ्याइ रहेका छन् । र उनीहरु पार्टीमा क्रमशः आबद्ध भइरहेका छन् । कतिले अलि खुल्छन त कति भित्र भित्रै पार्टीमै झुल्छन् । तसर्थ शिक्षकलाई एकोहोर आरोप लागउनु उचित होइन ।
डोर सरले शिक्षकले राजनीति गर्नु मिल्छ भन्ने मत राख्नु भए पनि उहाँले त्यसको लागि केही सर्त राख्नु भएको छ । त्यसमा मेरो पनि सहमति छ ।
एउटा शिक्षक भएको नाताले मैले शिक्षक साथीहरुलाई राजनीति गरौँ भन्ने सन्देश दिन खोजेको विल्कुलै होइन । प्रसंगवस मैले शिक्षा र राजनीतिको भूमध्ये रेखामा उभिएर मुल्याङ्कन गर्न खोजेको हो ।
शिक्षकले, पहिलो र अन्तिम कुरो चाँहि शिक्षण धर्म सतप्रतिशत निर्वाह गर्नुपर्छ । शिक्षणमा पूर्णरुपमा इमान्दारीता निर्वाह गर्नुपर्छ । राज्यको तलब लिएर, केटाकेटीको शैक्षिक भविष्यको लागि आएका शिक्षकले शिक्षणमा अब्बल हुनुपर्छ । कम्तिमा आफ्नो अवधिभर उसको प्रथम पहिचान निश्चित रुपमा शिक्षककै हुनुपर्छ । विद्यालय परिसरमा राजनीतिको गन्ध छिर्नु हुन्न । राजनीतिको आडमा कसैमाथि आग्रह वा पूर्वाग्रह राख्नु हुन्न । आफ्नो समय र अरुबेला पनि उसले आफ्नो शुद्ध शिक्षकको चरित्रलाई कायम गर्नुपर्छ ।
त्यस बाहेक एउटा शिक्षकलाई आफुले मन परेको पार्टीसँग नजिक रहन दिनुपर्छ । अहिले थुप्रै शिक्षकहरुले आर्थिक उपार्जनको लागि शिक्षण वाहेक थुप्रै आंशिक पेशा गरिरहेका छन् । त्यस्तै राज्यसेवाको लागि आंशिक रुपमा शिक्षकले राजनीति गर्न नहुने ? यो तथ्य परक छैन ।
इच्छुक शिक्षकहरु आफ्नो पेशाप्रति वफादार रहँदै राजनीतिमा लाग्छन भने उसको सम्मान गर्नुपर्छ । शिक्षकहरु विभिन्न योजना हुनसक्छ । के थाहा भोलि त्यही शिक्षक देशको प्रधानमन्त्री बनेर देशलाई परिवर्तन गर्ने हो कि । नेपालमा थुप्रै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरु कुनै बेला शिक्षक थिए भन्ने तथ्य भुल्नु हुन्न । कुनै बेला विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयका अब्बल शिक्षकहरु आज राजनीतिमा पनि अब्बल छन् । यसो गर्दा कसलाई के घाटा भयो र ?
अहिले डोर सर पाँचदशक उमेर नपुग्दै आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल योगदान गरेर निवृत्त हुनुभयो । यदि अब उहाँले पूर्णकालिन राजनीति शुरुगर्नु भयो भने भोलि यो देशका मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन के वेर ? यसो भयो भने घाटा केही हुन्न फाइदै फाइदा छ । कामचोरहरुले मात्र राजनीति गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई । डोर सर हिजादेखि नै कांग्रेसको समर्थक हुनुहुन्थ्यो । उहाँले राजनीतिक आडमा कुनै गलत कार्य गर्नुभएन । बरु आफ्नो राजनीतिक पहुँचलाई विद्यालय उकास्न प्रयोग गर्नुभयो ।
अतः शिक्षकले राजनीति ग¥यो भन्दै ठूलो बखेडा झिक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नीजि क्षेत्रका शिक्षकहरु त झन पार्टी र शिक्षा दुबै क्षेत्रमा बराबरा जस्तो प्रगति गरेर अघि बढेका छन् । अहिले पनि केही सांसद नै छन् । आज डोर सरलाई हेर्दै गर्दा मलाई भन्न मन लागेको छ कि इमान्दर भयो भने कुनै पेशा र आस्थाले उसको योगदानलाई थुनछेक गर्न सक्दैन ।
तथापि फेरि एउटा प्रश्न उठ्छ नै । राजनीति गर्न मन भए किन शिक्षक हुनुप¥र्याे, राजनीति नै गरे भइहाल्यो नि ?
यसो हेर्दा प्रश्न सहि जस्तो लागे पनि यो मिथ्य र बखेडा झिक्ने प्रश्न मात्रै हो । यो प्रश्न अहँकारको पराकाष्ठा हो । कतै केही भएन भने प्रश्नको लागि प्रश्न गरेको मात्र हो ।
किन ? कसरी ?
पहिलो कुरा राजनीति कमाइँ खाने पेशा होइन यो सेवा मात्र हो । राजनीति मात्र गरेर यो धर्तीमा कोही पनि बाँचेका छैनन् । बाँच्न सक्दैनन । नेपालका र विश्व भरीका राजनीतिज्ञहरुले कुनै न कुनै रुपमा, कुनै न कुनै पेशा वा व्यवसाय गरेका छन् । त्यसैको आम्दामीमा आफ्नो र परिवारको जीविकोपार्जन गरेका छन् । यो तथ्यलाई बुझ्नु पर्छ । नेपालका नेताहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, बैँक, निर्माण, जल विद्युत, उद्योग, शेयर लगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । यो सामन्य कुरो हो । राजनीति गरेर मात्र जीवन निर्वाह हुँदै हुँदैन । राजनीति बाहेक उसलाई अरु क्षेत्रमा सहभागी हुन नदिने हो भने उसले कनफर्म भ्रष्ट्रचार गर्छ ।
त्यसैले शिक्षकले आफ्नो पेशा शिक्षणको साथमा आंशिक रुपमा राजनीतिसित जोडिन सक्छ । मानौँ एउटा शिक्षकले राज्यबाट तलब लिएको छ । त्यस्को केही रकम उसले राजनीतिक दललाई चन्दा दियो । त्यो राजनीतिक दलले देश विकासको लागि काम गर्देछ । यो सन्दर्भमा त राज्यको तलब बुझेर एउटा शिक्षकले फेरि राज्यलाई नै सेवा दिने उद्देश्य राखेको छ भने के खराबी भयो र ?
फेरि पनि भन्न चाहान्छु कि शिक्षकहरुले राजनीति गरौँ भनेर आवहन गर्न खोजेको होइन । यदि कसैले आफ्नो शैक्षिक धर्मलाई शिरोधार्य गरी आंशिक रुपमा ऊ कुनै राजनीतिक विचारसँग नजिक रहन चाहान्छ भने दिनुपर्छ भन्ने हो । तर, मर्जी सबैको आफ्नै हो ।
वास्तवमा मूल कुरा नियतको हो । नियत ठिक भए सबै ठिक हुन्छ । अप्रेसन गर्ने क्रममा मान्छे मरे पनि डाक्टरलाई पाप र कानुनले छुँदैन किन कि उसको नियत विरामीलाई बचाउने हुन्छ मार्ने होइन ।
अतः कसैले जय नेपाल भन्यो भने यो त कांग्रेसको कार्यकर्ता रहेछ भनेर बुझ्ने तथाकथित विज्ञहरुको मानसपटलमा समझको घाम लागेर नियत ठिक भयो भने शिक्षक, डाक्टर, खेलाडी, कलाकार जोसुकै राजनीतिमा जोडिए पनि केही गलत हुन्न । समाजिक तथा कानुनी रुपमा विभिन्न आरोपहरुमा मुछिएका कतिपय गलत छवि भएका मानिसहरु त यहाँ नेता तथा मन्त्री भएका छन् । त्यसो हुनु भन्दा त एउटा असल शिक्षक नेता वा मन्त्री भयो भने देशलाई राम्रो हुन्छ ।
शिक्षाको धागोमा राजनीतिका फुलहरु उनेर यो देशलाई सजाउने तपाईँका सपनाहरु पुरा होउन् । आफ्नो जीवनलाई नै उत्कृष्ट नमून बनाउँनु भएको बधाई एवम् थ्याङ्क्यू डोर सर ।
डोरप्रसाद आचार्यराजेन्द्र बुढाथोकीशिक्षकशिक्षा
रोनाल्डोको कारण नोक्सान, पोग्बाबाट नसोचेको फाइदा !